उत्कृष्ट ब्लोअप सुन्दरी - सेलिब्रेटी - साप्ताहिक
साप्ताहिकको मध्यपृष्ठमा ब्लोअप भएन भने के होला अथवा मध्यपृष्ठलाई हटाइयो भने के होला ? मोडल तथा अभिनेता निराजन प्रधान भन्छन्–त्यसपछि म साप्ताहिक नै हेर्दिनँ । अभिनेता हसन खान भन्छन्–त्यसपछि चलचित्र तथा मोडलिङको क्षेत्रमा अवसर खोजिरहेका युवतीहरूले ठूलो अवसर गुमाउने छन् ।
फेसन डिजाइनर रोजिना श्रेष्ठ भन्छिन्– साप्ताहिकमा रस बाँकी रहँदैन । सबैको भनाइको तात्पर्य साप्ताहिक र मध्यपृष्ठका सुन्दरीहरू एक–अर्काका परिपूरक हुन्, बितेका २२ वर्षदेखि साप्ताहिकको मध्यपृष्ठले सातैपिच्छे पाठकको मन जित्दै आएको छ । पाठक मात्र होइनन्, मोडलिङ तथा मनोरञ्जनको क्षेत्रमा अवसर खोजिरहेकाहरूका लागि करियरको पहिलो खुड्किला मानिन्छ साप्ताहिकको मध्यपृष्ठ । त्यसैगरी यो क्षेत्रमा स्थापितहरूका लागि पुन: चर्चा पाउने मौका पनि हो यो ।
साप्ताहिकले यो अंकदेखि २३ औं वर्षमा पाइला टेकेको छ । बितेका २२ वर्षमा साप्ताहिकले इन्फोटेन्मेन्ट पत्रिकाका रूपमा विभिन्न सूचना तथा मनोरञ्जनका सामग्री प्रस्तुत गर्दै जाने क्रममा मध्यपृष्ठलाई भिन्न–भिन्न कन्सेप्टमा आधारित तस्बिर छनौट गरेर ब्लोअप (मध्यपृष्ठ) मा स्थान दिइरहेको छ । फोटोग्राफी, मेकअप, पोज, लोकेसन तथा डिजाइनमा समयअनुसार परिवर्तन गर्दै एवं स्तरियता बढाउँदै हरेक अंक पाठकहरूलाई नयाँ स्वाद चखाउन साप्ताहिक सफल पनि भैरहेको छ । मध्यपृष्ठलाई आकर्षक बनाउन मोडल, नायिका तथा सुन्दरीहरूको छनौट गर्दा फोटोग्राफी, सुन्दरता, ग्ल्यामर आदि कुरालाई विशेष प्राथमिकता दिइन्छ । चलचित्र निर्देशक दिवाकर भट्टराई भन्छन्– साप्ताहिकको मध्यपृष्ठमा आउन अब कुन अभिनेत्री, मोडल वा युवती बाँकी होलान् र ? भन्ने सोचिन्छ, तर हरेक अंकमा साप्ताहिकले सकेसम्म नयाँ मुहार नभए चर्चित मुहारलाई नयाँ ढंगबाट प्रस्तुत गरिरहेको हुन्छ ।
ब्लोअपमा पुरुष !
२२ औं वर्षभरिमा साप्ताहिकले ५० वटा ब्लोअप प्रकाशन गर्‍यो, जसमा फ्रेस मोडलदेखि लिएर स्थापितसम्मले स्थान पाए भने त्यस क्रममा सुन्दरीहरूलाई टक्कर दिँदै पुरुषको ब्लोअप पनि प्रकाशित भयो । पाठक तथा शुभेच्छुकहरूको एउटै प्रश्न रहने गरेको छ– साप्ताहिकमा पुरुषको ब्लोअप किन छापिँदैन ? साप्ताहिकको मध्यपृष्ठ महिला मोडल तथा सेलिब्रेटीहरूका लागि नै छुट्टयाइएको छ । त्यसैले ब्लोअपमा पुरुषलाई स्थान नदिइएको हो, पुरुषका लागि अरू स्तम्भहरू छन् । यद्यपि पुरुषको ब्लोअप प्रकाशन नै नभएको वा नहुने भने होइन । भ्यालेन्टाइन डे, होलीजस्ता अवसरमा प्रकाशित हुने ब्लोअपमा पुरुषले पनि स्थान पाउने गरेका छन् । यद्यपि त्यस्ता ब्लोअपमा महिला मोडल वा सेलिब्रेटी पनि जोडिएका हुन्छन् । यो वर्ष भ्यालेन्टाइन अंकमा प्रकाशित ब्लोअपमा अभिनेता अनुपविक्रम शाही अभिनेत्री सृष्टि श्रेष्ठसँग रोमान्टिक मुडमा देखिएका थिए ।
विगतमा राजेश हमाल, दिलीप रायमाझी, निमा रुम्बा, धीरज राई, रामकृष्ण ढकाल, भुवन केसीजस्ता धेरै पुरुष सेलिब्रेटीका ब्लोअप साप्ताहिकमा प्रकाशित भैसकेका छन् । धेरै समयपछि साप्ताहिकमा यो वर्ष अभिनेता अनमोल केसीको ब्लोअप प्रकाशित भयो । लिमोजियम कारमा बसेका अनमोलको उक्त पोज धेरैले मन पराए । चलचित्र ‘ड्रिम्स’को प्रदर्शनका लागि लन्डन पुगेका केसीलाई साप्ताहिकका लागि फोटोग्राफर कुशल श्रेष्ठले क्यामेरामा कैद गरेका थिए ।
फरक कन्सेप्ट, फरक ब्लोअप
असार ३ गते एउटा यस्तो ब्लोअप प्रकाशित भयो जसमा दुई युवती बाइकमा थिए । काठमाडौं बौद्धकी नवाङ मोक्तान र न्युरोडकी विञ्जु श्रेष्ठ ‘लेडी बाइकर्स’ हुन् । उनीहरूले राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय बाइक स्टन्ट तथा रेसिङमा सहभागिता जनाइसकेका छन् ।
असार १७ गते रोपाइँलाई मध्यनजर गर्दै मोडल सुमिरा प्रधानले रोपाइँको मज्जा लिइरहेको ब्लोअप प्रकाशित भएको थियो । साउन लाग्न १ दिन बाँकी थियो । साउनमा धेरैजसो महिला मेहन्दी लगाएर आफूलाई सुन्दर बनाउँछन् । मेहन्दी आर्टिस्ट मनीषा व्यञ्जनकारले मोडल अस्मिता गौतमलाई मेहन्दीले सिँगारेपछि खिचिएको उक्त ब्लोअप पाठकहरूले निकै रुचाउनुभयो ।
असोज २१ गतेको दसैं अंकका लागि चंगा उडाउँदै अभिनेत्री वर्षा राउत तथा मोडल विनिता क्षेत्रीले दिएको पोजले दसैंको वातावरणलाई चित्रण गरेको थियो भने (कात्तिक १२ गते) तिहारको वातावरणमा अभिनेत्री श्वेता खड्काको पोजले रौनक थपेको थियो । फूलको रंगोलीमा श्वेताले दियो बालिरहेको उक्त तस्बिरलाई धेरैले फरक पोजका रूपमा रुचाए ।
यसैगरी ‘तरकारीवाली’ का रूपमा सामाजिक सञ्जालमा चर्चा कमाएकी धादिङकी सामान्य छात्रा कुसुम श्रेष्ठलाई फेसनकर्मी रोजिना श्रेष्ठले मेकओभर गरेर फरक ‘लुक्स’ दिएपछि खिचिएका तस्बिर मध्यपृष्ठमा प्रकाशित भएपछि मिश्रित प्रतिक्रिया आउने क्रम लामो समयसम्म चल्यो ।
दुई मोडल ओशिन भट्टराई र कृति खरेलको चैत २८ गते प्रकाशित ‘जोली पोज’ले पनि राम्रै चर्चा पायो भने वैशाख ८ गते मोडल उरुषा पाण्डेको ‘मत्स्य सुन्दरी’ पोज र पहिरनको चर्चा पनि राम्रैसँग भयो ।
वर्ष २२ को ५० सातामा प्रकाशित ५० वटा ब्लोअपमध्ये ४६ वटा सिंगल ब्लोअप प्रकाशित भए । ती ४६ जना सुन्दरीको ब्लोअपमध्येबाट साप्ताहिकको अनलाइन संस्करण तथा सामाजिक सञ्जाल फेसबुक एवं ट्विटरमा सर्वाधिक हेरिएको वा मन पराइएको उत्कृष्ट २४ ब्लोअप छनौट गरिएपछि रंगकर्मी तथा अभिनेता सोमनाथ खनाल, अभिनेता प्रमोद अग्रहरी, मोडल तथा अभिनेता निराजन प्रधान, फोटोग्राफर विनोद पोखरेल, नृत्य निर्देशक सुरेन बसेल, गीतकार तथा व्यवसायी किशोर घिमिरे, छायांकार अर्जुन तिवारी, भिज्युअल सम्पादक भरत रेग्मी एवं गायक तथा संगीतकार उदेश श्रेष्ठले फरक–फरक ढंगबाट सर्वोत्कृष्ट १२ ब्लोअप छनौट गरे, जसमा निर्णायकहरूले फोटोग्राफी, पोज तथा फोटोजेनिकका आधारमा नम्बर दिएका थिए ।
निर्णायकहरूको मतका आधारमा यो वर्ष चलचित्र ‘कान्छी’बाट कमब्याक गर्न लागेकी अभिनेत्री श्वेता खड्काले अरुभन्दा बढी नम्बर प्राप्त गरिन् । अभिनेता श्रीकृष्ण श्रेष्ठको निधनपछि शोकमा रहेकी उनकी जीवनसंगिनी श्वेता गत वर्षदेखि मात्र व्यवसाय तथा कार्यक्रमहरूमा सक्रिय हुन थालेकी हुन् । त्यही क्रममा गत तिहारमा खिचिएको तिहार कन्सेप्टको ब्लोअपमा उनको सुन्दरतालाई धेरैले रुचाए । निर्णायकहरूलाई पनि उनको उक्त पोज औधी मन पर्‍यो ।
यसैगरी यो वर्ष प्रकाशित ब्लोअपमध्ये ‘तरकारीवाली’ का रूपमा चर्चामा आएकी धादिङकी कुसुम श्रेष्ठलाई निर्णायकहरूले ‘राम्रो मेकओभर’ का आधारमा मन पराए । त्यसैले उनी दोस्रो स्थानमा रहिन् । मिस नेपाल इन्टरनेसनल–२०१२ शुभेच्छा खड्काको ह्वाइट गाउन पोजले निर्णायकहरूबाट तेस्रो स्थान प्राप्त गर्‍यो ।
२०१२ की मिस तामाङ सुमी खड्काको होली पोजले चौंथो स्थान प्राप्त गर्‍यो भने ‘ठमेल बजार’ गीतमा नृत्य गरेर चर्चामा आएकी अभिनेत्री तथा नृत्याङगना एलिशा राईको शिवरात्रि पोज पाँचौ स्थानमा रह्यो ।
प्रदर्शोन्मुख चलचित्र प्रेमगीत–२ बाट डेब्यु गर्न लागेकी अभिनेत्री अश्लेषा ठकुरीको चुलबुले पोजले छैटौं स्थान प्राप्त गर्दा मोडल रेनुकासिंह ठकुरीको ग्ल्यामरस पोजले सातौं स्थान प्राप्त गर्‍यो ।
मोडल तथा अभिनेत्री सम्पदा बानियाँको आकर्षक पोजले आठौं स्थान पाएको यो सूचीमा हङकङ निवासी गायिका रविना थापाको चुलबुले स्टाइललाई निर्णायकहरूले नवौं स्थान दिए ।
काठमाडौंको हनुमान ढोका दरबार क्षेत्रमा परेवा उडाउँदै आधुनिक पहिरनमा इटहरीकी मोडल पूजन थापाले दिएको पोजले दसौं स्थान प्राप्त गर्‍यो भने मोडल सरला थापाको स्टाइलले एघारौं तथा पोखरामा सम्पन्न जंगल फेस्टिभलका क्रममा जंगल थिममा आधारित मोडल मुस्कान घतानेको पोजले बाह्रौं स्थान प्राप्त गर्‍यो ।
प्राय: हरेक शुक्रबार साप्ताहिक हेरिन्छ । पहिले–पहिले पत्रिका हातमा पर्नेबित्तिकै मध्यपृष्ठ पल्टाइन्थ्यो । अहिले पनि हेरिन्छ । हामीले चलचित्र तथा अन्य विधाका लागि कास्टिङ खोज्ने काम थालेका छौं । ब्लोअपमा प्रकाशित तस्बिर त्यसका लागि उपयोगी भएका छन् ।
म अभिनयसँगै कास्टिङ डाइरेक्सन पनि गर्ने भएकाले हरेक शुक्रबार साप्ताहिकको ब्लोअप मेरा लागि अभिनेत्री खोज्न सहयोगी भएको छ । त्यसबाहेक हरेक साता मध्यपृष्ठमा सुन्दरीको तस्बिर हेर्न पाउँदा हरेक शुक्रबार गुड फ्राइडे हुने गरेको छ ।
मेरा सहकर्मी महिला मोडल तथा साथीहरूको ब्लोअप आएका बेला रमाइलो पनि लाग्छ । बरु हामी जस्ता पुरुष मोडलहरूले साप्ताहिकको मध्यपृष्ठमा कहिले स्थान पाउने ?
नीराजन प्रधान, मोडल/अभिनेता
म सबै खालका फोटोग्राफी गर्छु । महेश प्रधानले साप्ताहिकको मध्यपृष्ठका लागि खिचेका तस्बिर मलाई निकै आकर्षक लाग्छन् ।
संघर्षरत महिला अभिनेत्रीहरूका लागि भने यो अवसरको ढोका हो । त्यो अवसर पाएर अघि बढेका थुप्रै मोडल एवं अभिनेत्री नेपाली ग्यामर उद्योगमा निकै छन् ।
मोडल तथा अभिनेत्रीहरूका लागि नेपालको लिडिङ टेबलोइड साप्ताहिक चर्चा र काम दुवै प्राप्त गर्ने माध्यम हो ।
विगतमा साप्ताहिकको ब्लोअपलाई छाडा भन्नेहरूलाई बिस्तारै सभ्य, कलात्मक अनि आकर्षक ब्लोअप प्रकाशन गरेर जवाफ दिइँदैछ । म साप्ताहिकको ब्लोअपको नियमित पाठक हुँ । अहिले फेरि साप्ताहिकको ब्लोअप निकै आकर्षक लाग्न थालेको छ ।
साप्ताहिकका आकर्षणमध्ये वर्षौंदेखि पाठकको रुचिमा पर्दै आएको ब्लोअपले धेरैको मन जितिरहेको छ, मेरो पनि ।
भरत रेग्मी, भिज्युअल सम्पादक
नयाँ म्युजिक भिडियोको प्लान गर्नेबित्तिकै मोडलका लागि साप्ताहिकको ब्लोअप हेर्ने चलन पुरानै हो । साप्ताहिकले मोडलहरूका लागि अवसरको बाटो खोलिदिने गरेको छ ।
उदेश श्रेष्ठ, गायक